Ukuphupha iLitye lokusila Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ilitye lisetyenziselwa ukulola iimela ezibuthuntu kunye nezinye izixhobo zokusika. Amatye okulola ukusetyenziswa ekhaya mancinci kwaye ayasebenza. Amatye okusila eencakuba ezinkulu kunye nezixhobo ajongeka ngathi ngamatye okusila amancinci kwaye ayenziwa ngesixhobo esikhethekileyo njengevili. Ukongeza kwiimela nezikere, amatye axabisekileyo ayasetyenzwa ngelitye elithethiweyo. Imela okanye izixhobo zokulola isikere zazidla ngokuhamba zisuka edolophini ziye edolophini kwaye zibonelela ngeenkonzo zazo kwimiboniso.
Ukuba umntu uphupha ngelitye elola, usenokungena ngokupheleleyo kumsebenzi wokulola. Ukuba inkalo yesikhokelo iphambili, umphuphi uyavuya kwinkqubela phambili yomsebenzi wakhe. Nangona kunjalo, unokwazi ukubona imela ebukhali njengesongelo. Umxholo apho kufumaneka khona isimboli yephupha kubalulekile ekutolikeni iphupha.
1 Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwesimboli yephupha "ilitye lokusila" kubalulekile ukumisela ukuba iphupha lisibona kuphela isixhobo okanye ukuba kukho into elungiswa ngalo. Ilitye elingasetyenziswanga ephupheni lilumkisa ngokuchasene nokunyelisa kwaye, ngokokutolikwa kwephupha isanga. Umphuphi kufuneka angabathembi abantu abangalunganga. Kuba oku kungakhokelela kwimpikiswano.
Ukuba uphawu lwephupha «ivili lokusila» liyasebenza kwaye lijikeleza, oko kuthetha Qhuba kunye namandla. Ngapha koko, luphawu ekutolikeni iphupha ukuba iphupha linokufika ngabom phantsi kwemeko ethile. Iphupha elo luphawu lokuloba kweengqondo nengqondo.
Kwakhona, uphawu lwephupha elithi "whetstone" lubhekisa kwezokwenene. Bahlobo yabaphuphi, abakuxhasa ngengcebiso kunye nenkuthazo kwisenzo sakho.
Ilitye lobuxoki ngamanye amaxesha lifanekisela umfazi ekuchazeni iphupha; itsala umdla kwiqabane elinceda ukuphupha. Ukusebenza ephupheni ngamatye okusila kubonisa iimali zephupha. Izinzuzo ngokwembono. Bathozamile, kodwa basebenza ngokunyanisekileyo.
Imela ebukhali ephupheni ibonisa umnqweno wokwahlukana nento ethile. Isimboli yephupha, umzekelo, ingatsalela ingqalelo kwinto yokuba iphupha lifuna ukuphelisa ubudlelwane ngokokutolika kwephupha.
Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "ilitye lengubo" linxulumene Ukuziphatha okungapolwanga. Ukuba ukuphupha kulola umda ephupheni, ilitye libonisa ukusuka kwi-subconscious yakho ukuya kwimikhwa emibi, eyenza kube nzima ukuthatha inxaxheba kubomi boluntu. Kuya kufuneka ujonge indlela oziphethe ngayo kwaye uyilungise kwiindawo ezahlukeneyo ukuze ungazikhethi.
Ukuba omnye umntu usebenzisa ilitye lobunzima, isimboli yephupha inokulumkisa ngobundlongondlongo. Ekuchazeni amaphupha, okokuqala, imela ebukhali kufuneka iqondwe njengokuhlaselwa komntu. Ukuba umphuphi ngokwakhe ulola imela kwilitye lesimboli, uphawu lwephupha luphawu lokuba angathanda ukunikezela kwiminqweno yakhe.
Ilitye lingumfuziselo wokulola. Uhlalutyo umahluko. Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, uphawu lwephupha lubonisa ubukrelekrele bephupha, kunye nokukwazi kwalo ukuqonda nokuhlela izinto. Kukwabalulekile apha ukuba leliphi ikhaba elolwayo ephupheni.
Izikere zifanekisela ukusikwa kokugqibela, kodwa kunye nokusikwa kwento yokulungisa. Ekuchazeni iphupha, uphawu lwephupha "ilitye lobunzima" kule meko libonisa umnqweno wokwahlulwa okucocekileyo emntwini okanye kwimeko. Iphupha linokuba sisalathiso esivela kwi-subconscious ukuba ukuphupha kufuneka kuphucule izakhono zakho zonxibelelwano.
Uphawu lwephupha «ilitye lengubo» - ukutolika ngokomoya
Ukutolikwa ngokwasemoyeni kwesimboli yephupha «ilitye whetye», kubalulekile ukuba yeyiphi into esikiweyo ephupheni:
Imela luphawu Ukutsala kwaye inamandla amakhulu okomfuziselo njengesixhobo sedini. Ukuba iincakuba zesikere ziloliwe ngelitye elololayo, uphawu lwephupha lubonisa ukubakho kwe Ukudibana phakathi kwengqondo nomzimba.